Ndụ abalị na Doha, maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị | Akụkọ Njem
Ndụ abalị na Doha, maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Mariela Carril | | United Arab Emirates, Nduzi
Qatar Qatar bụ otu n'ime mba ndị kasị baa ọgaranya na Gulf Persia, ekele niile na mmanụ na gas. Isi obodo ya bụ Doha na agbanyeghị na ọ nweghị otu ama ahụ na Dubai na-anabata ndị njem si n'akụkụ ụwa niile, yabụ anyị na-eche maka ndụ abalị nke obodo ndị Alakụba na ihe ndị anyị na-abụghị ndị Alakụba Western nwere ike ime na ya.
Luckily anyị nwere ike ịnụ ụtọ a hectic na fun ndụ abalị na Doha, Ya mere, ekwela ka e buru ụzọ chee ma ọ bụ tụọ ụjọ. Ka anyị hụ ebe anyị nwere ike ịga, ihe anyị nwere ike ịme, n’oge na oge anyị na onye.
2 Ndụ abalị na Doha
Obodo tọrọ ntọala na 1825 na aha ya putara na arabic Osisi Ukwu. Ọ dị n'ụsọ osimiri nke obodo Qatar ma maka ọtụtụ narị afọ nke XNUMX ọ bụ mmadụ ole na ole biri n'ime ya, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ọkụ azụ pel. Obodo ahụ dị mfe mana ka nrigbu mmanụ na gas malitere ịmalite, akụ na ụba ọhụrụ gbanwere ọdịdị ya ruo mgbe ọ ghọrọ obodo buru ibu ma dịkwa ọhụrụ.
Ọ gaghị adị mma ka ị gaa n’agbata ọnwa Juunu na Ọgọstụ n’ihi na okpomoku dị ukwuu, na okpomọkụ nke 40 ºC ma ọ bụ karịa. Enwere otutu iru mmiri nke mere n'agbanyeghị agbanyeghị ọnọdụ okpomọkụ ihe na-egbu bụ mmetụta ọkụ. Ọ naghị esi mmiri ozuzo n'ihi ya, ọ dị mma ịga n'oge oyi n'oge niile.
Ndụ abalị na Doha
Doha bụ obodo kachasị ukwuu na steeti Qatar ma taa O nwere otutu otele na otutu ulo oru n’ime ha. nke na-enye abalị ihe. Ka anyị cheta na ọ bụ obodo ndị Alakụba na mmekọrịta ndị Alakụba ji mmanya na-aba n'anya. Nke ahụ bụ, belụsọ na ụfọdụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, a na-ahapụ ikike ya n'agbanyeghị agbanyeghị, ịbụ onye njem nleta bụ ihe ọzọ.
Ọ bụ naanị otu ụlọ oriri na nkwari abalị, Pearl. O nwere okpukpu abụọ, ogwe osisi atọ na nnukwu ụlọ ịgba egwu. N'ebe a, ndị bi na Europe na ndị njem nleta na-achọ ịme oriri na-ezukọta mana mana oge ụfọdụ ndị njem nleta na-efu obere ịbanye kemgbe ị ga-abụ onye otu. Ya mere, ọ dị mma izute mmadụ ma gwa ha ka ha kpọọ gị ebe ha nwere ike ịme ya.
Ma ọ bụghị ya, e nwere Ogwe dị ka anyị kwuru n'elu ị ga-ahụ ha na nkwari akụ. Ọmụmaatụ, na mbara ala nke Hotel Rydges bụ Aussie Legends Sports Bar nke bụ oge ọhụhụ mgbe enwere mmemme egwuregwu dịka ịgba rugby ma ọ bụ bọọlụ. Na Nkwari akụ Ramado enwere ogwe egwuregwu-egwuregwu ọzọ nke na-enyekarị ndị ogbo ya egwu dị iche iche ka a na-agbakwunye egwu ndụ na telivishọn mgbe enweghị ọkụ ịlele.
Cloud Nyn na-arụ ọrụ na Al Sadd Merweb Hotel, Obere diski nwere ọkụ gbara ọchịchịrị, ọ fọrọ nke nta ka ọ daa ruo n'ókè nke na n'ọnụ ụzọ ha nyere gị tọọchị. Jụụ! Na Doha, n'aka nke ọzọ, e nwekwara Sheraton Hotel na ebe mmanya na-arụ ọrụ n'ime Harp Irish, ebe kachasị mma ị toụ pints na pints biya na nnukwu ikuku na egwu dị ndụ na ọtụtụ European vibes. A kpochapụwo Irish pub ma na Qatar. I nwedịrị ike ị smokeụ sịga n'ime.
Na Ritz-Carlton enwere ebe mara ezigbo mma, na marina, a na-akpọ Admiral si. Ọ nwere ime ụlọ na oghere dị n'èzí nwere echiche dị ebube. Sọnde bụ maka ụmụ agbọghọ, ndị ladybọchị ụmụ nwanyị ejedebe na ngwụsị izu niile. Ogwe ahụ na-enye mmanya dị iche iche iri na nke kachasị mma, Kwesighi ịbụ onye otu ihe ọ bụla ịbanyeNaanị ejiji nke ọma (n'ezie n'abalị ụmụ agbọghọ na-agba site na Sọnde ruo Wenesen gụnyere). Oge awa sitere na 5 pm ruo 12 am.
Iche echiche dị egwu na nke oge a anyị na-adabere n'akụkụ ihe ntụchi na mbara ala, karịa n'obodo dị ka nke a mgbe ọ na-ekpo ọkụ. Sofa mara mma, egwu nke oge a, isi iyi nwere mmiri pọmpụ, nche anwụ ọgbara ọhụrụ, ihe niile bụ. Dị ọcha, na Hilton. N'ebe a, nzukọ ga-amalite mgbe e mesịrị, na 8 pm, ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, n'abalị nke ụmụ agbọghọ na-agwụ na 10 pm.
Ke West Bay bụ Kempinski na nke isii nke ụlọ mmanya Z ezumike. Banye n’enweghị onye òtù nke ihe ọ bụla ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ịnwere ike ịnụ ụtọ ego pụrụ iche na Mọnde. Site na elekere ise ruo elekere iteghete ihe ọ drinksụ drinksụ a na-eri ihe dịka 5 QR ma abalị na-aga rue elekere abụọ nke ụtụtụ. Otu n'ime usoro ụlọ ọrụ ndị mara mma n'ụwa, n'echiche m, bụ agbụ W. N'ebe a na Doha enwere otu n'ime ha ma n'ime ọrụ ahụ Wham.
Emegharịala ya kpamkpam n'oge na-adịbeghị anya, na ikuku nke oge a (mgbidi na-acha akwụkwọ ndụ, ala ojii, agba sofas), na ụbọchị Mọnde ụmụ nwanyị na-enwekwa obi ụtọ na ego na-ewe mgbe 9:30 pm, ọ bụ ezie na ọ na-emepe ụzọ ya na 7: 30 pm. Famouslọ nkwari akụ ọzọ a ma ama bụ Oge anọ na Nobu na-arụ ọrụ ebe a, Ogwe osisi nke nwere ihe ngosi mara mma na ọkụ abalị mara mma.
Nobu nwere Oge Obi thattọ nke so n'etiti ndị kasị ewu ewu na Doha maka ụmụ nwanyị. Ọ na-adịkarị ịhụ ndị ọbịa si mba ọzọ ebe a n'abalị Mọnde, n'etiti 6 na 8 elekere. Ogwe ahụ na-etinye menu pụrụ iche na ọnụahịa pụrụ iche ma na-enye ya n'ime ụlọ White Pear na Black Pearl. Ọ kachasị mma ịga ebe ahụ n'oge iji nweta tebụl n'ihi na ịnweghị ike ịtụ nri ma ọ bụrụ na ịnweghị. Na-agba ọsọ! Abalị a na-agwụ na 1 nke ụtụtụ.
na Melia Doha enwekwara mmanya na nnọkọ oriri. A na-akpọ ụlọ mmanya ahụ Noir na ọ bụ ebe a na-ege egwu mba ofesi, azụmahịa na R&B. Na Tuesday, ụmụ nwanyị anaghị akwụ ụgwọ nnabata na ụmụ nwoke, ọ bụrụ na ha chọrọ ịga maka iji ndị ahịa nwanyị mee ihe, ha ga-akwụrịrị 50 QR mgbe elekere 9 nke abalị gachara. Eziokwu bụ na Noir dị ka ihe si na fim, ọ dịkwa mma. Na Gwakọta mmanya o dikwa nma n'oge a. Ọ na-arụ ọrụ na Westin Hotel.
N'ebe a, ị na-ege Hip Hop, R&B na Tuesday na ị nwere abalị ụmụ agbọghọ n'etiti elekere 5 nke mgbede na elekere abụọ nke ụtụtụ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, abalị dị ogologo. Ọ dịkwa mma ịbịa tupu elekere 2 n'ihi na mgbe ahụ ị nwere Oge Obi totọ iji jiri. Free n'ọnụ ụzọ. Hip hop ma ọ bụ disko anaghị amasị gị? Mgbe ahụ ị nwere ike ịga Klọb ahụ, na St Regis Doha: ebe a n'abalị Tuesday otu ìgwè egwu Cuba na-egwu, Gerardo na habaneros. Ogwe dị na ụlọ nke anọ nke ụlọ nkwari akụ ahụ ma enwere ọnụahịa pụrụ iche ruo etiti abalị.
Chọrọ ịnọdụ ala na nnukwu mmanya, yana oche akpụkpọ anụ na ọkụ ọla edo? Mgbe ahụ gaa na Ulo ezumike Cigar, na Sharq Village & Spa. Chọrọ ịnụ jazz dị ndụ? Mgbe ahụ e nwere Jazz Club, na Oryx Rotana. You chọrọ DJ si? Mgbe ahụ gaa ịkpali ọkpụkpụ na Ulo ezumike ndi mmadu n'ime Hilton Hotel. Na nkọwa ndị ọzọ: Tuesday bụ abalị ụmụ agbọghọ mana ọ bụghị maka ihe ọ cheapụ drinksụ dị ọnụ ala kama ọ bụ maka etemeete. Ee, na mgbakwunye na menu na ihe ọ cheapụ drinksụ dị ọnụ ala abalị niile enwere usoro etemeete na usoro ntutu. Akwa! Ọzọkwa, ndị ụgbọ elu Emirates na-akwado abalị ahụ ka ụmụ agbọghọ soro maka njem na ụlọ ọrụ ahụ. Ntuchi nchekwa!
Rịba ama ụlọ mmanya ndị a: Ime ụlọ ezumike, na nkwari akụ W, Lava ezumike, na Intercontinental Doha, Ogwe mmanya mmanya Glo, na Marriot Marquis, ndị Pearl ezumike, na Marriot, Mmiri mmiri, Crowne Plaza, ndị Paloma na Intercontinental.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Ndụ abalị na Doha, maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Nleta 16 dị mkpa na Sardinia II
Nleta dị mkpa na Sardinia I